Kedụ ka mgbanwe ihu igwe siri metụta ebe mmadụ na-akwaga ebe ọzọ? | Network Meteorology
Kedụ ka mgbanwe ihu igwe siri metụta ebe mmadụ na-akwaga ebe ọzọ?
Otu ihe ọjọọ ngbanwe ihu igwe na-akpata bụ chọta onwe gị n'ọnọdụ nke ịhapụ ụlọ gị n’oge ndụ gị niile. Ma ọ bụ n'ihi ajọ ifufe nke bibiri obodo gị, oke ịrị elu oke osimiri nke na-eyi ụlọ egwu, ma ọ bụ ụkọ mmiri nke na-ebelata mmiri ngwa ngwa nke na ọ na-egbu ọnwụ n'ihi enweghị mmiri na mpaghara gị, ị gaghị enwe nhọrọ karịa ịga chọọ ndụ ka mma.
Beingsmụ mmadụ bụ ụmụ anụmanụ nwere ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi nke maara otú ha ga-esi gbanwee ma chịa ha n'akụkụ niile nke ụwa, mana okike nwere mgbe niile achịcha n’ihu anyị. Nke a bụ otú mgbanwe ihu igwe si emetụta nchụpụ nke ndị mmadụ dị ka data si Observatory nke Mwepụ Obodo (IMDC).
N’afọ 2016, ọtụtụ ọdachi ndị na-emere onwe ha nwalere ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa. Naanị na Cuba, Ajọ ifufe a na-akpọ Hurricane Matthew mere ka nde mmadụ pụọ, na-agụtaghị ndị ga-apụkwa n'ihi ọnwụ nke ụlọ ha.
Na Philippines, ajọ ifufe na oke ifufe na-ekpo ọkụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 15 ha aghaghị ịhapụ mba ahụ. Na Myanmar, ala ọma jijiji na mmiri ozuzo mere ka ebe obibi karịa mmadụ 500.000 na 2016.
Mwepụ nke mmadụ n'ihi esemokwu (nke abụọ na nke atọ) na ọdachi ndị na-emere onwe ha.
Foto - Mpaghara-displacement.org
Na Asia, na karia na China na India, mmụba nke ọzara na enweghị isi ihe, yana mmetọ gburugburu ebe obibi, emeela ka ebe obibi ihe karịrị nde mmadụ asaa na ihe karịrị nde mmadụ abụọ otu.
Dabere na UNHCR, Reflọ Ọrụ Gbara Ọsọ Ndụ nke UN, nkezi nke Nde mmadụ 21,5 na-ebugharị kwa afọ site na egwu metụtara ihu igwe kemgbe 2008. Ọ bụrụ na nke a gara n'ihu na emeghị ihe iji gbochie mgbanwe ihu igwe, a na-atụ anya na ọnụọgụ ahụ ga-arị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Kedụ ka mgbanwe ihu igwe siri metụta ebe mmadụ na-akwaga ebe ọzọ?
Mmetụta nke mgbanwe ihu igwe kacha mma tụọ site na mbara igwe